Kusukela maphakathi ehlobo futhi kuze kwekwindla for emizi kufika inkathi matasa - the ukuwafaka nobusika izithelo, imifino, izithelo. Isikhathi esithathayo lukhulu, kanye zabasebenzi. Ngakho-ke ngifuna hostesses enjalo zokupheka, owawuzobanika ithuba lokwenza umsebenzi ngokushesha ngaphandle kokuyekethisa izinga umkhiqizo. Vnesom thina izimbuzane.
Pickles ukudla okusheshayo wenza singapheli amandla. inqubo inzalo. Kodwa amabhange angaqhuma, kubalulekile ukugcina olinganise efanele marinade bese uhlole ukuthi baphumula kahle imifino ofakwe. Lokulondolozwa kuthathwe ukhukhamba eqinile amancane, oluhlaza amnyama, ne nezinduna. Amathiphu zombili kufanele usike. Uma imifino isindala kakhulu, ezinkulu, zingase uthathe imibuthano 3 cm ukushuba. Konke kuhamba kahle wageza bafakwa namakani thwi uvalwe. Ifake uphethiloli ukhukhamba Ukudla Okusheshayo phezu kadokotela ezinjalo ekubunjweni (isibalo izingxenye ibalwa kuya ku-2.5 kg imifino): amanzi - 9 izibuko, usawoti - 1 inkomishi, uviniga (6%) - 1 inkomishi, apula esikhulu omuncu-sweet - 3 izicucu. Thela pan kunani elicacisiwe eziwuketshezi, ukubeka apula thinly lisikiwe zibe tincetu (ukususa imbewu), ukushisa ukuncibilikisa usawoti bese ushiye ukubilisa konke. Ake ugcwalise ukhukhamba Fast ukudla pokipit mayelana imizuzu 40 phezu ukushisa eliphezulu. Susa Foam. Khona-ke brine ubunzima, imenze thumba bese ugcwalisa ku izimbiza imifino, ikhava zamabhodlela. Ake umkhiqizo sukuma ngendlela kuphole, bese enye ingxenye usuku noma amahora angu-24. Ngemva kwesikhathi esibekiwe, ukhukhamba yakho ukudla okusheshayo e-Korean kufanele ukushintsha umbala kusuka green ensundu. Ngemva kwalokho cwenga ugcwalise futhi ebhodweni, kukhona vsypte izinongo (pepper, pepper ezishisayo, garlic) kanye ubilise imizuzu 10-15. Ukhukhamba ugeze, hashaza soda amathini. Nalapha packagi imikhiqizo, uthele marinade abilayo futhi Roll up noma eduze kapron zamabhodlela. Esikhathini ukudla ukhukhamba, zifakwe emanzini anosawoti ngaphandle inzalo, sesilungile ngesonto nesigamu. Basuke etholwe elimnandi, iqinile futhi kancane abukhali - injabulo yangempela ngenxa gourmets!
Kuhle kakhulu kanye retseptik ezinjalo, okubandakanya ezihlukahlukene ezinuka kamnandi. I amathini ukuze yemifino inqaba Kunconywa laying (ezansi) kanye kwesihlahla se-okhi cherry ishiya, futhi ukunambitheka - Amahlumela okuphoqelekile kanye dill izambulela, fresh noma owomile.
Ulungiselela ukhukhamba kule Indlela: walala ngokwabo ukhukhamba, phakathi kwabo - a clove ambalwa ugarlic (2-3 1.5 litre jar), amakhambi (bheka isithombe esingenhla)., A izingcezu ezimbalwa pepper ashisayo, futhi 4-5 uphizi elimnandi. Egcwele up 2 amathisipuni kasawoti kanye noshukela 2 wezipuni of uviniga (9%). zamanzi isipikili embozwe zamabhodlela oyinyumba futhi ithini ethunyelwe abilayo. Sterilisation Isikhathi - imizuzu engu-15 zisuka abilayo marinade ngaphakathi amathini. Ukhukhamba kufanele ushintshe umbala. Basuke-ke lakhishwa and roll. Gcina imifino pickled kufanele kube egumbini elingaphansi noma enye indawo cool ngaphandle umswakama.
Wena zakatok okumnandi!
Pancake abazacile soda ku ubisi - okungcono zokupheka
Casserole semolina izingane kanye nabantu abadala
Salad nge amakhowe: zokupheka
Sandwich - iresiphi okunempilo hhayi kuphela, kodwa futhi isidlo enempilo
I Mentalist - indoda ngomqondo ongaphezu kovamile
Uyini elingenamikhono izingalo Tula futhi nokuthi sisho ukuthini?
Zemali Isiliva Russia tsarist nezindleko eseduze. isithombe
Ukuvikela imiklamo - isisekelo isakhiwo
Funny "Bravis": ukubuyekezwa, ukumisa, imodeli